Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fiomanana amin’ny fanaovana ezaka vaovao | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fiomanana amin’ny fanaovana ezaka vaovao
Vita eo ny momban’ny fifidianana, ny fanambaran’ny Fitsarana Avo ny vali-pifidianana no mamarana an’iny fotoana iny. Andro vitsivitsy sisa manelanelana amin’ny fandraisan’ny mpandresy ny adidiny, fotoana fohy iomanany amin’ny fanaovany ezaka vaovao sy amin’ny fanentanana ny vahoaka hiara-dia mba handray anjara amin’izany ezaka izany. Na iza na iza moa lany teo, tsy afaka nodifirina ny ezaka ho famokarana izay hany fomba ahitana fandrosona. Tsy misy izany fiandrasa-potsiny fahamasahan-kanina ahafahana andrapaka izany, tsy maintsy mamadika bainga, mamafy,… vao afaka hioty sy itango mba isitrahana ny vokatra. Samy manana ny anjara asany mifanandrify amin’ny andraikiny sy ny fahaizany manao.
Goavana ny anjaran’ny filoha : azy no misafidy sy manendry an’ireo olona izay ho tompom-pahefana ambony mpitarika avy any an-tampony ny fanatanterahana, mbola azy ihany koa hatrany amin’ny fanentanana ny fahazoton’ny mponina hiezaka ao anatin’ny rafitra nosoritany eo amin’ny fanaovana fampandrosona tsara rary.
Noho izany tonga dia raikitra tsy misy andraso-andraso intsony. Araky ny fandinihany an’ireo fanambarana sy fanomezan-toky nandritran’iny fotoana tsy nisy fetrany iny namelana fanaovana fampielezan-kevitra sy fandresen-dahatra dia nanao ny safidiny ny vahoaka ary nametraka ny fahatokisany tamin’io olona nandresy io miankina amin’ny tanjona napetrany sy ny tetika narosony ny be sy ny maro. Samy mihevitra fa efa vonona avokoa ireo fomba fidirana an-tsehatra sy ny fihetsehana ampandrosona ny raharaha.
Na efa vonombonona aza ny fiheverana momban’ny forongo sy fitaovana ilaina, fantatra fa ny fanaovana ady koropaka rehefa manatanteraka ny asa dia anisan’ny fahavalo misalovana ny fanajana ny fenitra arak’izay nokendrena. Arakaraky ny fahamaizana no ilana fitandremana mba tsy andanina andro andraofana an’izay azo raofina amin’ny raraka.
Fahaiza-manao, akingana, fitandremana izany no takin’ny fanatanterahana an’ireo tolotra tsara tetika nambaraina nialohan’ny fifidianana. Samy manana adidy amin’ny filofosana anatanteraka ny anjarany izany anefa tsy miasakana ny fahalalahan’ny tsirairay mikasika ny fahafahany anambara ny heviny. Ny fanaovana peta-toko sy asa koropaka dia mendrika avokoa fitsikerana, nefa kosa mety ho sakantsakana fotsiny ho an’ny fanatanterahana sy fitsivalanana amin’ny zavatra mitombona ny fomba fanozongozonana ny rafitra toro-mariky ny fanaovana asa efa an-dàlana. Toy izany koa ny fanaovana fanoherana, malalaka ny sehatra ao anatin’ny fetra voafaritry ny lalàna.